Zere Nchegbu Mmanya. Nwee anụrị ma drinkụọ Legendes nke Bordeaux
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Zere Nchegbu Mmanya. Nwee anụrị ma drinkụọ Legendes nke Bordeaux
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Mmanya & mmuo
Nwee anụrị. Na -a Borụ Bordeaux
Ọ bụghị ihe ijuanya na mmanya na -abịa n'ọtụtụ agba - site na ọcha dị ka mmiri, ruo omimi, ọchịchịrị na dị ka ahịhịa velvet silk vintage. Ọ bụghịkwa ihe ijuanya na mmanya Bordeaux so na ndị kacha ewu ewu na mbara igwe.
Mpaghara Bordeaux bụ mpaghara kacha emepụta mmanya na France ma gụnye acres 280,000 nke vine na 60 Appellations d'Origine Controlees (AOCs).
Ime mmanya na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke France malitere mgbe ndị Rom rutere (chee narị afọ mbụ).
Ọ bụ ezie na a na -eto ebe ahụ maka mmanya na -acha ọbara ọbara, ọ bụ ihe na -adọrọ mmasị ịmara na ama ama a nwetara ọhụrụ.
Ọtụtụ mmanya vine
N’akụkọ ihe mere eme, mpaghara Bordeaux bụ ihe na -achọsi ike maka mmanya ọcha ya (ọkachasị) ya na ndị na -a wineụ mmanya na -etinye ihe karịrị pasent 80 nke ubi vaịn ha na Sauternes, Barsac, Bordeaux Blanc na ili.
Ọ bụ ruo afọ 1700 ka mmanya na -acha ọbara ọbara sitere na Bordeaux nwere mmasị n'ọma ahịa na ndị na -anụ mmanya Bekee nabatara mmanya Bordeaux na -acha ọbara ọbara sitere na Graves wee kpọọ ya Claret (klairette). Ozugbo ndị na -a theụ mmanya na -aba n'anya na -azụta mmanya na -acha ọbara ọbara, ha malitere isi na -acha ọcha na -emepụta mmanya na -acha ọbara ọbara. Mgbanwe ahụ ghọrọ nke gọọmentị na nhazi ọkwa 1855 nke gosipụtara ndị nrụpụta kacha mma na mpaghara ahụ, were ha ọkwa 1-5. Agbanwebeghị nhazi ọkwa (ewezuga otu ugboro) n'agbanyeghị na enwere ọtụtụ mmanya ndị ọzọ pụtara ìhè.
Iji gosi na mpaghara a ma ama maka ime mmanya, tụlee eziokwu ahụ na mpaghara a na -akwado ndị nwe chateux 6100 na ndị na -akọ ihe ndị ọzọ na -emepụta karama mmanya nde 650 (2019). Ugbo vinteji nke 2019 gụnyere pasent 85.2 uhie; Pasent 4.4 bilitere; 9.2 % kpọrọ nkụ na -acha ọcha, yana 1.2 pasent dị ọcha.
Bordeaux bụ nnukwu onye na -ewe mmadụ n'ọrụ na viticulture na ụlọ ọrụ mmanya, na -enye ihe karịrị 55,000 ọrụ na -apụtachaghị ìhè. Atọ n'ime ala ubi 4 ọ bụla na mpaghara na -eto osisi vaịn na mkpokọta enwere 5,6000 ndị na -eme mmanya na -emepụta mmanya AOC. N'ime pasent 56 ndị a bụ azụmaahịa ezinụlọ, yana nkezi ubi ubi ya dị 19.6ha nwere nnukwu ubi vaịn na Entre deux Mers na Medoc. Ihe dị ka pasent 5 nke elu ubi ubi nke Bordeaux bụ nke ala dị iche iche n'ofe aka ekpe na aka nri (winescholarguild.org).
Na mpaghara ahụ, ndị nwe chateaux na -erekarị mkpụrụ vaịn ha site na onye na -adịghị ahụ anya nke na -eme dị ka onye etiti site na ịzụrụ oke mkpụrụ vaịn ya ma ree / kesaa ya. N'ime mmanya a na -emepụta na mpaghara Bordeaux, a na -ere pasent 58 n'ime France ebe pasent 43 fọdụrụ na -ebupụ n'ụwa niile.
Ọ bụghị Ọchịchị. Geography: N'aka ekpe, aka nri, etiti
Gironde estuary kewara mpaghara Bordeaux na mpaghara aka ekpe gaa Bank Bank, Right Bank na Entre-Deux-Mer (mpaghara dị n'etiti Gironde Estuary na Osimiri Dordogne).
Aka ekpe ekpe. Ndị hụrụ mmanya n'anya na -ahụ Medoc, ili na sauternais (egwu kacha mma - dabere na gravel)
• Atụmatụ Medoc Cabernet Sauvignon; mkpụrụ vaịn na -etolite na ngwakọta nke ụrọ ụrọ na mbara ala alluvial gravel.
• Akụkụ ili nwere Cabernet Sauvignon; ájá gravelly n'ihi ọrụ glacial akụkọ ihe mere eme.
• Sauternais nwere atụmatụ Sauternes (mmanya ọcha na -atọ ụtọ); nnukwu gravelly gravel nke na -enyere mmiri igbapu mmiri, na -egbochi mkpụrụ vaịn inwe oke mmiri.
Akaụntụ Bank. Ndị hụrụ mmanya n'anya na -ahụ Libournais, Balye na Bourg (ala nke ụrọ na limestone na -achị)
• Akụkụ Libournais nwere Saint-Emilion, Montagne, Pomerol, Fronsac, Cotes de Castillon; ọkachasị limestone, aja na ụrọ ụrọ siliceous.
• Atụmatụ Balye nwere Merlot, Cabernet Sauvignon na Cabernet Franc; ọkachasị ụrọ n'elu ala nzu.
• Bourg nwere atụmatụ Malbec, Sauvignon Blanc, Muscadelle, na Semillon yana Colombard na Ungi; ájá, ụrọ, ajịrịja nkume na ala nzu.
Entre-Deux-Mers (naanị mmanya na-acha ọcha na-ebu mkpọtụ AOC); Cadillac, Loupiac, Sainte-Croix-du Mont
• Cadillac (amara maka mmanya ọcha botrytized dị ụtọ) nwere Semillon, Sauvignon Blanc na Sauvignon Gris; ala nzu na gravelly.
• Atụmatụ Loupiac Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle na Sauvignon Gris; ụrọ, ala limestone nke gravel na ụrọ mejupụtara.
• Sante-Croix-du Mont nwere Semillon, Muscadelle, na Sauvignon; ụrọ, ala nzu.
A na-ejikarị Sauvignon Blanc na Semillon eme mmanya mmanya Bordeaux na-acha ọcha ma na-adị ndụ (Entre-Deux-Mers) ka ọ dị nro na citrus (Pessac-Leognan).
Mmanya na-acha ọbara ọbara sitere na Bordeaux na-abụkarị nke ọkara juputara na isi nke currants ojii, plums na ụwa ma ọ bụ ajịrịja mmiri. N'elu ọnụ, profaịlụ ekpomeekpo gụnyere mineral, mkpụrụ osisi na ose, na -ebunye ọtụtụ tannins (dị mma maka ịka nká).
Bordeaux na -acha ọbara ọbara na -abụkarị ngwakọta na aha mmado na -ekwupụta aha mmanya karịa ụdị mkpụrụ vaịn dị iche iche agụnyere. Ụdị ọcha gụnyere 100 % nke osisi vaịn a kụrụ, yana pasent 5 Sauvignon Blanc na Semillon nwere Muscadelle na otu ọcha ndị ọzọ.
N'ime osisi vaịn a kụrụ na mpaghara, pasent 89 bụ ụdị ọbara ọbara, pasent 59 Merlot, pasent 19 Cabernet Sauvignon, pasent 8 Cabernet Franc na pasent abụọ ikpeazụ gụnyere Petit Verdot, Malbec ma ọ bụ Carmenere.
Ma ọ bụ Weather
Osisi vaịn Bordeaux na -anụ ụtọ oge ọkọchị na -ekpo ọkụ, mmiri mmiri na ọdịda, na -esochi oge oyi. La Foret des Landes, nnukwu ọhịa nke osisi pine, na -echebe mpaghara Bordeaux site na mmetụta ihu igwe nke Oké Osimiri Atlantic; agbanyeghị, mgbanwe ihu igwe na -emetụta mpaghara ahụ ma na -amịpụta mkpụrụ. Institut National de l'origine et de la Qualite (INAO), nkewa nke Ngalaba Na -ahụ Maka Ọrụ Ugbo na France, nọrọ afọ iri nyocha mgbanwe ihu igwe. Ndị ọkà mmụta sayensị mmanya na ndị na-emepụta ihe na Bordeaux na-echebara mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ na ụdị ọhụrụ ọhụrụ akwadoro n'oge na-adịbeghị anya nke dabara adaba iji belata nrụgide hydric metụtara mmụba okpomoku na usoro mkpirisi mkpumkpu.
N'ọnwa June, 2019, ndị otu Bordeaux na Bordeaux Superieur kwadoro mgbakwunye nke ọrịa ọhụrụ asaa na ụdị mkpụrụ vaịn na-eguzogide okpomọkụ na nke a na-anọchite anya mmegharị mbụ ụdị mkpụrụedemede iri na atọ nke mpaghara ahụ kemgbe 13. Ụdị asaa ọhụrụ a kwadoro gụnyere uhie (Marselan, Touriga) Nacional, Castets, Arinarnoa), na ọcha (Alvarinho, na Lilorila) nwere ahịhịa mbụ nke ụdị ọhụrụ ahaziri maka afọ a. Ụdị ọhụrụ a bụ naanị pasent 1935 nke mpaghara ubi -vine a kụrụ, ọ nweghịkwa ike ị nweta ihe karịrị pasenti iri nke ngwakọta ikpeazụ nke agba ọ bụla.
Bordeaux ewebatala omume ndị ọzọ na -enye ike na ọrụ ugbo iji lebara mgbanwe ihu igwe anya gụnyere: ime ka omume kacha mma maka mkpa nke ọmarịcha mkpụrụ vaịn ọ bụla - ịchacha oge, ịbawanye ogwe osisi vaịn iji belata mpaghara akwụkwọ; na-amachi ịdịcha akwụkwọ iji chebe mkpụrụ vaịn site na anyanwụ; imeghari saịtị ite iji belata nrụgide hydric (mmiri juru eju na -adịgide adịgide ma ọ bụ n'oge ọ bụla na -ebute ọnọdụ anaerobic); owuwe ihe ubi abalị na ibelata njupụta osisi.
Ihe karịrị pasenti iri ise na ise nke ubi vaịn Bordeaux bụ gburugburu ebe akwadoro (akara ọhụrụ maka mpaghara ahụ). Bordeaux na -eduga AOPs French niile na nnukwu asambodo gburugburu ebe obibi (HVE) maka mmanya ha, ebe ha rutere ọkwa asambodo na -adigide na France yana mmụba pasent 65 na ọrụ ugbo.
Ndị na -a Wụ mmanya na Bordeaux na -ekerịta ọhụhụ na mkpokọta iji lebara anya mgbanwe ihu igwe nke ọma site n'ichekwa ụkọ mmiri na ume; ichedo gburugburu ebe obibi na -emebi emebi; na ịkwado ihe dị ndụ dị iche iche site na omume ubi -vine kacha mma na nkwakọ ngwaahịa ọzọ. Ntinye aka na nkwado gụnyere nlebara anya maka ịkwalite nchekwa onye ọrụ, afọ ojuju ọrụ na ọzụzụ na mmepe/ọzụzụ maka ọgbọ dị ugbu a na ọdịnihu.
Mkpa mmanya dị mkpa na Bordeaux
Ngalaba Barons de Rothschild (Lafite) Les Legendes Na -eme Mmanya Dị Mma
Akụkọ mmanya nke Lafite na Latour gbasara ọtụtụ narị afọ. Oge izizi aha Lafite pụtara na narị afọ nke 13 (1234) mgbe akpọrọ Gombaud de Lafite, abbot nke ebe obibi ndị mọnk Vertheuil (north Pauillac). Aha Lafite sitere na okwu Gascon "la hite" ma ọ bụ hillock.
A na -eche na ubi vaịn adịlarị na ụlọ ahụ mgbe ezinụlọ Segur haziri ubi -vine na narị afọ nke 17 wee malite mara Lafite dị ka nnukwu ụlọ mmanya. Na narị afọ nke 18 Lafite malitere inyocha ahịa London wee hụ ya na London Gazette (1707) na -akọwa mmanya dị ka clarets New French. Robert Walpole, Prime Minista, zụrụ otu gbọmgbọm Lafite kwa ọnwa atọ. Mmasị ndị France nwere na mmanya Bordeaux amaliteghị ruo mgbe ọtụtụ afọ gachara na -eso nzọụkwụ Brits.
N'ime narị afọ nke 18, Marquis Nicolas Alexandre de Segur meziri usoro ịmakingụ mmanya ma bulie ugwu nke ezigbo mmanya n'ahịa mba ofesi na ọkachasị n'Ụlọikpe Versailles. N'ịbụ onye a maara dị ka "Onye isi mmanya," Lafite ghọrọ Wine King site na nkwado nke onye nnọchi anya nwere ike, Marechal de Richelieu. Mgbe a họpụtara Richelieu Gọvanọ nke Guyenne, ọ gakwuuru otu dọkịta Bordeaux nke dụrụ ya ọdụ na Chateau Lafite bụ, “ọ kacha mma na kacha atọ ụtọ n'ụdị tonics niile.” Mgbe Richeliu laghachiri Paris, Louis XV gwara ya, "Marechal, ị dị obere karịa afọ iri abụọ na ise mgbe ị hapụrụ Guyenne." Richeliu kwuru na ya chọtara Isi Iyi Ntorobịa na mmanya Chateau Lafite nke dị ka, “na -atọ ụtọ, na -emesapụ aka, na -enwe obi ụtọ, nke yiri ambrosia nke Chi Olympus.”
Lafite nwere ọmarịcha mgbasa ozi na Versailles wee nata nnabata Eze. Onye ọ bụla chọrọ ugbu a mmanya mmanya Lafite na Madame de Pompadour nyere ya oriri oriri abalị ya na Madame du Barry na -enye Wine Eze naanị.
Mmanya Bordeaux nke aristocracy French (Domaines Barons de Rothschild/Lafite) dị anyị n'aka site na akara Legende.
1. Legende Medoc 2018. Pasent 50 Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 10 % Petit Verdot. Oge ụfọdụ n'ime osisi oak ruo ọnwa 8 na -enye ndetu nke vanilla na ụda na -acha anwụrụ ọkụ.
Anya na -enwe ọ joyụ na -acha ọbara ọbara mgbe imi na -enwe ọmarịcha ihe na -esi ísì ụtọ, mkpụrụ osisi na -acha ọbara ọbara, ngwakọta dị ụtọ, ilu, nnu na utoojoo (na -eche licorice), nke ndetu nke mocha na tost sitere na ịka nká gbọmgbọm . Nri ahụ na -adị na okpo ọnụ na -enye ahụmịhe na -atọ ụtọ ma na -atọ ụtọ na -ewepụta ịdị ọhụrụ na njedebe. Jikọta ya na anụ ehi, nwa atụrụ, anụ ọchụ ma ọ bụ anụ ọkụkọ.
2. Legende R Paulillac 2017. Pasent 70 Cabernet Sauvignon, pasent 30 Merlot. Pasent iri isii mere agadi na osisi oak French maka ọnwa 12.
Mmetụta izizi nke mmanya miri emi na -acha odo odo nwere ntụpọ ojii na -egosi na ọ ga -abụ ọkaibe na nke nwere uche. Imi na -achọpụta ezigbo ọmarịcha ihe na -esi ísì ụtọ, jam utu, vanilla na flint na -ejikọ ọnụ. N'ịbụ onye nwere ntụkwasị obi na okpo ọnụ, ọ na-ewepụta akara mkpụrụ osisi ojii, aki oyibo, na vanilla nwere tannins nwere mkpuchi. Nke a bụ mmanya zuru oke ma na-ekwu okwu n'atụghị egwu. Jikọta steak anụ ehi, stew, chiiz tozuru etozu dịka Comte na Saint Netaire.
3. Legende Saint-Emilion 2016. 95 pasent Merlot, pasent 5 Cabernet Franc (sitere na mpaghara Libourne). Pasent iri anọ mere agadi na osisi oak nke French.
Anya mbụ a na -ele mmanya a na -egosi agba uhie na -acha ọbara ọbara. Imi na -enwe obi ụtọ mgbe ọ hụrụ licorice, plums, cherị, osisi osisi na ụtaba. A na -akwụghachi ọnụ ahịa okpuru ọnụ ndụmọdụ mocha, ahịhịa, cloves, senti, osisi ochie na ọmarịcha tannin. Jikọta ya na ọbọgwụ ma ọ bụ terrine jelii na quince jelii, ubu atụrụ a withara na rosemary ma ọ bụ thyme, pizza na pasta napolitana ma ọ bụ lasagna.
4. Legende R Bordeaux Rouge 2018. Pasent 60 Cabernet Sauvignon, pasent 40 Merlot.
Emeela agadi ọnwa 9 n'ime ite mmanya na pasent 60 nke ngwakọta ikpeazụ merela agadi.
Crimson na anya ya na mkpụrụ osisi na -acha ọbara ọbara na blakberị, licorice na ụtọ dị ụtọ na -arafu imi, ọkachasị dị ka isi nke mocha na tost sitere na gbọmgbọm ịka nká na -abanye na ahụmịhe ahụ. Ọhụrụ na ịmị mkpụrụ na okpo ọnụ, ngwụcha na -atọ ụtọ. Jikọta ya na risotto na ihendori anụ, pasta Bolognese, ham na salami.
5. Legende R Bordeaux Blanc 2020. Pasent 70 Sauvignon Blanc, 30 % Semillon.
Anya na -atọ ya ụtọ na -acha odo odo na -acha odo odo na ahịhịa ahịhịa. A na -akwụghachi imi ụgwọ site na ntinye mkpụrụ osisi ebe okpomọkụ na ihe atụ nke ịnweta ihe. A na-eji ire ụtọ dị okirikiri na-arata ọnụ ọnụ nke na-eduga na mkpụrụ osisi citrus dị ọhụrụ. Jikọta ya na nri mmiri, oysters raw, ihe ọ bụla nwere ihendori Bearnaise na salad akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (mgbakwasa na-abụghị mmanya).